प्रधानमन्त्रीले सांसदलाई दिइने १० करोड कार्यक्रम खारेज गर्ने « Janaboli
प्रधानमन्त्रीले सांसदलाई दिइने १० करोड कार्यक्रम खारेज गर्ने
काठमाडौंं । आफ्नै पार्टीका प्रभावशाली सांसदहरुको तीब्र दबाब रहे पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम खारेज गर्ने संकेत दिएका छन् । सत्तारुढ एमाले, माओवादी र विपक्षी कांग्रेसका सांसदले समेत पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको बजेट १० करोड बनाउन दबाब दिइरहेका बेला सरकार भने कार्यक्रम नै खारेज गर्ने तयारी गरेको छ । संसदमा प्रि बजेट छलफल भइरहेका बेला अर्थमन्त्री डा।. वराज खतिवडाले आगामी बजेटमा निर्वाचन क्षेत्र पुर्वाधार विशेष कार्यक्रममा बजेट विनियोजन नगर्ने संकेत गरेका छन् ।
संघीय संसदको क्यान्टिनमा भेटिएका अर्थमन्त्री खतिवडाले सांसदहरुले निर्वाचन क्षेत्र विकासमा १० करोड मागे पनि नदिने संकेत गरे । उनले भने ‘यो राजनीतिक विषय हो । माननीयज्यूहरुको चासोका सन्दर्भमा राजनीतिक तहबाटै छलफल भएर टुंगो लाग्छ । यसबारेमा प्रधानमन्त्रीज्यूकै तहबाट कुराकानी होला । अहिले म यसबारेमा कुनै प्रतिक्रिया दिन चाहन्न ।’ एमाले सांसदहरुले भने अर्थमन्त्री खतिवडाले नै प्रधानमन्त्रीलाई समेत कन्भिन्स गरेको आरोप लगाएका छन् । ‘१० करोड होइन, अहिले दिइएको ३ करोड पनि रोक्नुपर्छ भनेर कार्यक्रम खारेज गर्न अर्थमन्त्रीले नै प्रधानमन्त्रीलाई प्रभावित पारेको पाइयो’ एमालेका एक सांसदले अनलाइनखबरसँग भने । एमाले सांसदहरुले संसदीय दलको बैठकदेखि व्यक्तिगत र सामुहिक भेटघाटहरुमा पनि प्रधानमन्त्रीलाई निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम जनताबीच जाने राम्रो माध्यम भएको भन्दै बजेटमा व्यवस्था गर्न दबाब दिइरहेका छन् । उनीहरुले खोटाङबाट निर्वाचित सांसद विशाल भट्टराईको संयोजकत्वमा दबाब समूह नै खडा गरेका छन्, जुन समूहमा सबै पार्टीका सांसद छन् ।
सरकारले भने आगामी बजेटमा सांसदहरुको माग बमोजिम निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषमा १० करोड छुट्याउने होइन, यो आर्थिक वर्षमा कार्यन्वयनमा गइसकेको ३ करोड रुपैयासमेत रोक्ने संकेत गरेको छ । विकल्पमा सांसदको सिफारिसमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा केही ठूला आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्ने र त्यसको अनुगमनको जिम्मा सम्बन्धित क्षेत्रबाट निर्वाचित सांसदलाई दिने आश्वासन दिइएको छ । अहिलेको मोडलमा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधारका विकासका नाममा बजेट दिँदा सांसदले व्यक्तिगत रुपमा पाएको जस्तो मानिने र सर्वत्र आलोचना भइरहेको भन्दै प्रधानन्त्रीले सांसदहरुलाई कन्भिन्स गर्न खोजेका छन् । ‘छुटाउनै नहुने तपाईको निर्वाचन क्षेत्रका बढीमा ३ वटा विकास आयोजनाको नाम दिनुस्, बजेटमा पर्छन् र सांसदको प्रत्यक्ष अनुगमन हुने व्यवस्था गरिन्छ’ प्रधानमन्त्रीको आश्वासन एक सांसदले सुनाए ।
यी १९ तस्विर हेर्नुहोस् ग्यारेण्टीका साथ भन्न सकिन्छ जस्तो मुड भएकालाईपनि हसाएर मुर्छा पार्नेछ
काठमाडौ । हामी बेला–बेला मुड फ्रेस गर्ने तस्विरहरुको संग्रह पोष्ट गर्ने गर्दछौ । किनकी मानिसका
नयाँ ऐनलाई चुनाैती दिन सिंहदरबार अगाडि लाजकाे पाेकाे देखाउँदै निर्लज्ज हिँडेपछि…
काठमाडौ । अाजदेखि नयाँ मुलुकी ऐन लागू भएकाे छ । यही ऐनकाे विरोधमा मुलुककाे प्रमुख
LLB र BA, BBS, B.Ed, B.Sc को फारम भर्न छुटेकाहरुका लागि विशेष मौका सम्बन्धि अति जरुरी सूचना
काठमाडौ । त्रिभूवन विश्वविद्यालयको ३ बर्षे स्नातक तह LLB दोस्रो बर्ष, ३ बर्षे स्नातक तह BA,
एकदिवसीय क्रिकेटमा ज्ञानेन्द्रलेपनि बनाए यस्तो कीर्तिमान
काठमाडौ । ज्ञानेन्द्र मल्लले एकदिवसीय क्रिकेट खेलमा नेपालको तर्फबाट पहिलो अर्धशतक प्रहार गर्ने कीर्तिमान बनाएका
यो हो १ देखि १२ कक्षासम्मै १००% छात्रवृति दिने नेपालकै नमुना बिद्यालय [ सम्मानमा सेयर गरौ ]
प्रवेश परीक्षामा सामेल नभएकाले पनि कानून पढ्न पाउने : कालोकोट र ब्याच अनिवार्य
असोज ११ गते हुने माध्यमिक तहको शिक्षक सेवा आयोगको देशभरीको परीक्षा केन्द्र [ सेयर गरौँ ]
असोज १२ गते हुने निम्नमाध्यमिक तहको शिक्षक सेवा आयोगको देशभरीको परीक्षा केन्द्र [ सेयर गरौँ ]
असोज १३ गते हुने प्राथमिकक तहको शिक्षक सेवा आयोगको देशभरीकै परीक्षा केन्द्र [सेयर गरौँ]
निर्मलाको लागि न्याय भन्दै काठमाडौंमा विशाल जनप्रर्दशन
सार्वजनिक सवारीको बढेको भाडा : कुन जिल्लाको कुन ठाँउमा कति पुग्यो ? [सूचीसहित]-सेयर गरौ
निर्मला प्रकरण छानविन गर्न गठित उच्चस्तरीय समितिको प्रतिवेदन तयार : प्रतिवेदनमा के छ ?
ओली सरकारलाई चुनौती दिँदै गंगामाया न्याय खोज्न अन्तराष्ट्रिय अदालत जाने
नापी कार्यालयका कर्मचारी घुस लिएको अभियोगमा अदालतमा मुद्दा दायर
बलात्कारपछि हत्या भएकी निर्मलाको कपडा पखाल्ने प्रहरीको पोलिग्राफ टेष्ट : के खुल्यो रहस्य !